I-China yaphosa ipani yentsimbi yokucoca ngesiphatho esinye somthi akukho lula ukunamathela ngaphandle kokutyabeka ukwenziwa kunye neFektri | ISANXIA
Phosa ipeni yentsimbi ngesiphatho esinye somthi akukho lula ukunamathela ngaphandle kokutyabeka
Ingcaciso:*320 * 95mm
Ezantsi kwembiza:Unokukhetha ezantsi okanye ezantsi
Yenziwe ngentsimbi yehagu yentlanganiso ecocekileyo. Iphilile kwaye iyasebenza. Akululanga ukwaphula emva kokusetyenziswa kwexesha elide. Yimbiza eyimfuneko phantse kuzo zonke iintsapho.
Xa upheka, ubushushu buqhutywa ngendlela efanayo, isibane esimnyama sincinci, kwaye emazantsi embiza atyebile, anokugcina ubushushu kakuhle. Ke ngoko, izinto zokutya akukho lula ukuzincamathisela, kwaye zinokuphekwa ngokukhawuleza, ezinokugcina ngokupheleleyo isondlo. Izitya eziqhotsiweyo zimnandi kwaye zinencasa elungileyo.
Izixhobo zentsimbi yehagu ngobunyulu obuphezulu zikhethwe ngokungqongqo. Ngoninzi lweemvavanyo, kuyaqinisekiswa ukuba iya kuba kukuphosa okunempilo nokufanelekileyo. Okokuqala, iya kupolishwa ngoomatshini abazenzekelayo, kwaye ekugqibeleni, iya kupolishwa ngomsebenzi wezandla. Umphezulu wembiza ugudile kwaye isiphatho sihle kakhulu. Akukho nto yokutyabeka ngekhemikhali embizeni, ngoko akukho lula ukurusa. Ukutyeba kwembiza kuyilwe ngocoselelo, kungoko kuqhuba ngcono kuhanjiso lobushushu kunye nokugcinwa kobushushu.
Isibambo senziwe nge-walnut emnyama emnyama ekumgangatho ophezulu kunye nokuthungwa kwendalo kunye nokumelana nobushushu obuphezulu. Akululanga ukukhubazeka kunye nokuqhekeka emva kokusetyenziswa kwexesha elide. Iyahambelana nombala womzimba webhodi yentsimbi. Ilula kwaye ikhululekile ukubamba. Inamandla okuthwala kwaye izinzile kakhulu.
Indlebe yepani idityaniswe nomzimba wepani. Izinto ezifanayo zentsimbi azoyiki ubushushu obuphezulu. Yomelele ngakumbi. Awunakukhathazeka ngokubhakwa kwesitovu xa upheka. Xa uhambisa isiphelo, ungasebenzisa iigloves ezichasayo.
Embizeni zingenziwa iinkcukacha ezahlukeneyo, ezantsi kunokuba ezantsi ngeenxa zonke, okanye ezantsi tyaba, ungakhetha ngokweemfuno zakho. Ukongeza, isiciko sinesiciko somthi kunye nesiciko seglasi esiqinisiweyo, isitayile siphezulu kuwe.
Egqithileyo Ubisi Embizeni Cast Iron wayesebenzisa Casserole Non-Stick ukuba Qhotsa Pan Baby Qhotsa Pan Baby ukugqibezela Ukutya Ubisi Hot Noodle Pot
Okulandelayo: I-oven eseDatshi esempilweni inamandla okupheka
uNamel Skillet, ebizwa ngokuba yiCast Iron Skillets, i-Cast yentsimbi enqabileyo, xtreme Iron Skillet, Isinyithi se Iron Iron, I-Iron Iron Skillet,